Vehivavy Saodiana Iray Maty Taorian’ny Nandavan’ny Anjerimanontolo Ny Zanany Vavy · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy Saodiana Iray Maty Taorian'ny Nandavan'ny Anjerimanontolo Ny Zanany Vavy
MpanoratraMohammed Al Nemer
Voadika ny 30 Jolay 2015 11:21 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Română , English
Dikasarin'ny lahatsary mampiseho an-dRamatoa Al Hwaity, eo ankavia, miady hevitra amin'ny biraon'ny fandraisana ao amin'ny anjerimanontolo mialohan'ny nahafatesany
Tena maty ara-bakiteny tany amin'ny faritry ny anjerimanontolo ny renim-pianakaviana Saodiana iray vonton'alahelo raha nolavina ny fidiran'ny zanany vavy tao amin'ny sekoly mpampiofana ho mpitsabo. Niparitaka be ny lahatsary maneho ilay reny miady hevitra amin'ireo mpiasa misahana ny fidirana ao amin'ny Anjerimanontolon'i Tabuk, izay niteraka adihevitra tao amin'ny media mahazatra sy ny media sosialy mikasika ny hatsiakan'ny fihetsiky ny anjerimanontolo manoloana ilay zava-nitranga.
Nandeha nanatona ny mpisahana ny fidirana ao amin'ny anjerimanontolon'i Tabuk i Rahma Al-Hwaity sy ny vadiny, Faisal Al-Hwaity, mba hanontany ny antony nahatonga ny fandavana ny fangatahan'ny zanak'izy ireo vavy rehefa nangataka hiditra tao amin'ny sekoly mpampiofana ho mpitsabo izy ireo, hoy ny tatitry ny gazety Makkah.
“Na ho faty mpandresy aho na ho vonton'alahelo,” hoy Rahma Al-Hwaity tamin'ny mpanolotsaina iray misahana ny fandraisana, araka ny asehon'ilay lahatsary izay nozaraina tao amin'ny YouTube.
Afaka mijery izany lahatsary izany ianao eto ambany:
Talohan'ny nahafatesany, nandrahona Ramatoa Al-Hwaity fa hitarika fitokonana ivelan'ny faritry ny sekoly izy. Minitra vitsy taorian'izay anefa, maty vokatry ny fijanonan'ny fo izy raha niandry ny vadiny namita ny fihaonany tamin'ireo mpanolotsaina.
Nilaza ny Anjerimanontolon'i Tabuk tanatinà valandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety fa tsy misy ifandraisany velively amin'ny fandraisana ny zanany vavy ny fahafatesan'ilay ramatoa.
Hita tanatin'ilay valandresaka ny taratasy fanamarinam-piankohonan'i Al-Hwaity sy ireo anjerimanontolo nokasain'izy ireo hidirana. Mampiseho ihany koa izany fa ny zanakavavin'i Al-Hwaity, izay tsy voatonona anarana mihitsy tanatin'ireo fandrakofana, dia nametraka ny fahalalana mikasika ny solosaina ho safidiny voalohany. Ao Arabia Saodita, raha vao mangataka hiditra ao aminà anjerimanontolo ianao, dia tsy maintsy misafidy taranja lehibe 10 araka izay tianao kokoa. Raha mahay azy rehetra ireo ianao dia voaray amin'ilay safidinao voalohany.
Niampanga ny Anjerimanontolon'i Tabuk ho nanova ireo safidin-janany i Faisal Al-Hwaity, izay nanampy tao amin'ny gazety Al-Hayat fa manana porofo izy.
Nilaza ny mpitondrateny iray ao amin'ny Minisitry ny Fampianarana fa nanome baiko ny hananganana komity mpanao fanadihadiana iray ny minisitra mba hamboraka ireo hevitra ao ambadiky ny fandavana ny zanak'i Al-Hwaity tao amin'ny sekoly mpampiofana ho mpitsabo na dia nahafeno ireo fepetra rehetra aza izy ireo, araka ny fanambaràna iray navoaka tao amin'ny Facebook.
Nampiady hevitra be tao amin'ny Twitter ny fahafatesan'io vehivavy tao Tabuk io, tamin'ny alàlan'ny fampiasana ireo tenifototra #جامعة_تبوك (Anjerimanontolon'i Tabuk) sy #الام_اللتي_ماتت_قهرا_في_تبوك (Ilay reny maty vonton'alahelo tao Tabuk). Nanosika ny toe-javatra hiadian-kevitra tao amin'ny median'i Arabia Saodita, ny TV sy ireo gazety, ilay tenifototra. Nampiseho ny fizarazaran'ny vahoaka ihany koa izany, saingy maro tamin'izy ireo no nangoraka ny fianakaviana.
Nilaza ny Dr. Manal Meccawy, mpampianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i King Abdulaziz, tao amin'ny Twitter fa:
الله يرحمها، لكن الجامعات لا تدار بالعواطف. بيان الجامعة مقنع والأجل مكتوب..والأب يريد تنفيس حزنه #وفاة_معلمة_لعدم_قبول_ابنتها_بكلية_الطب
— د.مرام #قاب_قوسين (@Dr_MMeccawy) July 24, 2015
Andriamanitra anie hiantra ny fanahiny, fa ny anjerimanontolo tsy mandeha amin'ny alàlan'ny fihetseham-po. Maharesy lahatra ny fanambaran'ny anjerimanontolo… maniry ny hampitosaka ny alahelony ilay raim-pianakaviana.
I Barjas Albarjas, mpanoratra Saodiana iray hafa, nilaza fa:
يدافعون عن الخطأ ليس تأييدا له، بل لأنهم يغارون ع أنظمة مليئة بالأخطاء #الام_اللتي_ماتت_قهرا_في_تبوك #وفاة_معلمة_لعدم_قبول_ابنتها_بكلية_الطب
— Barjas Albarjas (@Barjasbh) July 24, 2015
Misy olona sasany miaro ny fahadisoana, tsy noho ny fanohanany izany, fa noho izy ireo saro-piaro amin'ireo rafitra rotidrotiky ny fahadisoana.
Nozaraina manerana ny media sosialy ihany koa ny sariitatra manazava ilay toe-javatra. Mampiseho olona roa miezaka ny hiditra ny biraon'ny mpitantana ilay sariitatra. Wasta no mpiambina ny vavahady, na ilay olona tsara fifandraisana izay afaka manampy anao amin'izay tianao haleha. Ilay lehilahy manana marim-pahaizana tsara dia tsara dia voasakana tsy hiditra raha ilay olona iray izay zara raha afaka fanadinana kosa dia noraisin'i Wasta soa amantsara:
تنشد عن الحال هذا هو الحال ! ومع ذلك هنالك من يقف في صف الجلاد ؟! #جامعة_تبوك #الام_اللتي_ماتت_قهرا_في_تبوك pic.twitter.com/kthnZGqypc
— خالد مساعد الزهراني (@KhalidMosaid) July 24, 2015
Izao no zava-mitranga eto anivon'ny fiarahamonina misy antsika. Na eo aza anefa izany, hiandany ny mpanao ny tsy rariny ihany ny sasany.
Avy any Jeddah, te-hahalala izay tompon'andraikitra tamin'ny zava-nitranga tamin-dRamatoa Al-Omrani sy izay sazy hatrehany ny Dr Fawaz Al Ayesh:
القضية الآن هي قضية المجتمع كاملا، يهمنا أن نعرف من المتسبب وماهي العقوبة التي ستتخذ بحقه #وفاة_معلمه_لعدم_قبول_ابنتها_بكلية_الطب
— د. فواز العايش (@fawav) July 24, 2015
Zary lasa olam-pirenena izany ankehitriny. Tokony ho fantantsika izay ao ambadik'izany sy izay sazy tokony hatrehiny.
#وفاة_معلمة_لعدم_قبول_ابنتها_بكلية_الطب رسالتي للأبنة كوني عظيمة مثل أمك انتصري لأمك بدخولك الطب حققي حلمها يا دكتورة 👍
— أماني الشعلان ~ (@alshalanamani) July 25, 2015
Hafatra ho an'ilay zanaka vavy: Tsy maintsy vehivavy mendrika ianao mba handresenao ho an'ny reninao amin'ny fidirana anatinà sekoly mpampiofana ho mpitsabo, mba ho tanteraka ny nofinofiny.
Ary ny Dr Ali bin Shareeda izay mipetraka any Riyad, mpikambana iray ao amin'ny akademia misahana manokana ny fianarana teny, dia milaza fa raha nisy ratsy natao, tsy maintsy misy ny voasazy:
إن كانت مستحقة فيجب إحالة مدير الجامعة وعميد القبول والتسجيل للمحاكمة بتهم الفساد والقتل غير العمد. #وفاة_معلمة_لعدم_قبول_ابنتها_بكلية_الطب
— د. علي بن شريدة (@ali_magid) July 24, 2015
Raha nanan-jo hiditra ao amin'ny sekoly mpampiofana ho mpitsabo izy nefa tsy voaray noho ny antony tsy ara-drariny, dia tokony hampiakarina fitsarana ny talen-tsekoly sy ny lehiben'ny birao fandraisana sy fidirana noho ny fanaovana kolikoly sy ny famonoana olona tsy nahy.